अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारलाई सुझावः नाकामा रहेका नेपाली स्वदेश फर्काऊ – www.Pradesh1TV.com
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारलाई सुझावः नाकामा रहेका नेपाली स्वदेश फर्काऊ
भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यको विशाखापटनममा राति विषाक्त ग्यास चुहावट हुँदा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । पाँच हजारभन्दा बढी मानिसमा विषाक्त ग्यासले असर गरेको र उनीहरुलाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एलजी पोलिमर्स इन्डिया प्रालिको केमिकल प्लान्टबाट विषाक्त ग्यास चुहावट भएको हो । सन् १९६१ मा स्थापित यो प्लान्ट सुरुमा हिन्दुस्तान पोलिमर्सको स्वामित्वमा थियो । सन् १९९७ मा यो प्लान्ट दक्षिण कोरियाली कम्पनी ‘एलजी’ ले लिएको थियो ।
बिहीबार बिहान करिब तीन बजेतिर एलजी पोलिमर कम्पनीबाट अचानक विषाक्त ग्यास फैलिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । स्थानीयबासी घरमै सुतिरहेको समयमा ग्यास फैलिएको बताइएको छ । एक्कासी श्वास फेर्न कठिनाई हुने, बान्ता हुने, आँखा पोल्ने जस्ता लक्षणसहित मानिसहरु घरबाहिर निस्कन थालेका थिए ।
सोही क्रममा कयौं मानिस सडकमै बेहोस भएर ढलेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । निजी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुले जनाएअनुसार ५ हजारभन्दा बढी मानिस अस्वस्थ भएर विभिन्न अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनीहरुमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएको अवस्थामा एक साथ पाँच हजारभन्दा बढी मानिसलाई विषाक्त ग्याससम्बन्धी बिमारीको उपचार गर्न निकै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
घटनालगत्तै प्रहरीले सो क्षेत्रका पाँच गाउँ खाली गराएको छ । रातारात सो क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
एलजी पोलिपर्स कारखानाको करिब तीन किलोमिटर दायरामा विषाक्त ग्यास फैलिएको बताइएको छ । ग्यास कसरी चुहियो भन्नेबारे प्रष्ट भइसकेको छैन ।
अधिकारीहरुका अनुसार बिहीबार बिहानै ग्यास चुहावट प्रकरणमा एलजी कम्पनीविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले मुद्दा दायर गरेको छ ।
हामी खराब अवस्थामा छौं !
हामी अहिले निकै नै खराब अवस्थामा छौं ! चुनौतीहरु धेरै छन् यो जोखिमबाट छुट्कारा पाउन ! अस्पतालका शैयाहरु पूर्णरूपमा भरिएका छन् , अक्सिजन नपाएकै कारण ज्यान पनि गुमाईरहेकाको छन् भन्नुको मतलब उपचार पाउन न...
इटहरी जेठ ४ गते मध्यराति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा
इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको समयावधि थपिएको छ । मङ्गलबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरको उपमहानगरपालि...
नेपाली सेनाले बनायो ७५ बेड क्षमताको होल्डिङ्ग सेन्टर
बिराटनगरमा दुई दिनमा नेपाली सेनाले बनायो ७५ बेड क्षमताको होल्डिङ्ग सेन्टर, एक हजार बेडकाे अर्को हाेल्डिङ्ग सेन्टर पनि बनाउने तयारी नेपाली सेनाकाे भैरब गणले मोरङ्गको बिराटगरमा दुई दिनकाे छाेटाे अवधिमा ...
बिराटनगरमा आइतबार ४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यू
नक्कली औषधीको लेबल पटनामा छापिन्थ्यो
न्यूज ब्रेक (1,010)